Isaia 3 - Baiboly Masina [Malagasy Bible 1865]
Manomeza Mifandraisa aminay Fampiharana
Rosiana Synoda Belarosiana Okrainiana Poloney 1975 Poloney 1910 Serba 1865 Serbianina Latina 1865 Biolgara 1940 Biolgara 1914 Slovakian Tseky 2009 Tseky Ekumenicky Tseky Kralichka 1613 Tseky Kralichka 1998 Romainina Azerbaijana 1878 Azerbaijan Atsimo Armeniana Albaney Slovenianina 2008 Slovenianina 1882 Croatian Estoniana Letôna LJD Letôna Gluck Litoanianina Hongariana 1975 Hongariana Karoli 1589 Finoa 1933 Finoa 1776 Finoa 1992 Norvejiana 1930 Norvejiana 1921 Soedoa 1917 Soedoa 1873 Soedoa Folk Islandey Grika 1770 Grika GNT 1904 Grika Maoderina 1904 Grika 1994 Hebreo Alemaina 1951 Alemaina 1545 Alemaina Elber 1905 Alemaina Luther 1912 Dutch 1637 Dutch 1939 Dutch 2007 Danoà 1931 Danoà 1819 Valesa Frantsay 1910 Frantsay Darby Frantsay Jerusalem Frantsay Vigouroux Basque Italiana 1971 Italiana La Nuova Diodati Italiana Riveduta Espaniola 1909 Espaniola 1569 Espaniola 1989 Jamaikana Portogey 1993 Portogey Almeida 1628 Portogey Almeida 173 Portogey CAP Portogey VFL Nahuatl Kiche Q'eqchi Quechuan Novely Zelandy Maleziana Papouasie-Nouvelle-Guinée 1997 Papouasie-Nouvelle-Guinée Tok Pisin Tiorka 1989 Tiorka HADI Hindi HHBD Hindi ERV 2010 Goujrati Kannada Malayalam Marathe Оdia Tamoul Telogo Birmana Nepale 1914 Nepale Tamang Filipina Cebuano Tagalog Kambojiana 1954 Khmer 2012 Kazakhstana Thailandey Afrikaans Xhosa Zolo Sotho Amharic 1962 Amharic DAWRO Amharic GOFA Amharic GAMO Amharic Tigrinya Wolaytta Nizeriana Dinka Alzeriana Ondrivavikely Swahili Maraoka Somaliana Shona Madagasikara Romani Gambia Kiorda Haisiana Bengali 2001 Bengali 2017 Urdu 2000 Urdu 2017 Pendjabi Arabo NAV Arabo SVD Persianina 1895 Persianina Dari 2007 Indonezianina 1974 Indonezianina BIS Indonezianina TL Indonezianina VMD Vietnamiana 1926 Vietnamiana ERV Vietnamiana NVB Sinoa Notsorina 1919 Sinoa Drazan'i 1919 Sinoa Notsorina 2005 Sinoa Drazan'i Vaovao 2005 Sinoa Drazan'i ERV 2006 Anarana 1954 Anarana 1965 Koreana 1961 Koreana AEB Koreana KLB Koreana TKV Anglisy ESV Anglisy NASB Anglisy NIV Anglisy NLT Anglisy Amplified Anglisy Darby Anglisy ASV Anglisy NKJ Anglisy KJ Aramaic Latina Esperanto Kôpta Kôpta Sahidic
3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 3:9 3:10 3:11 3:12 3:13 3:14 3:15 3:16 3:17 3:18 3:19 3:20 3:21 3:22 3:23 3:24 3:25 3:26
Fa, indro, Jehovah, Tompon'ny maro, Manaisotra amin'i Jerosalema sy Joda izay andry sy tohana rehetra: Dia ny mofo sy ny rano rehetra, izay tohan'aina,
Ny lehilahy mahery sy ny mpiady, Ny mpitsara sy ny mpaminany, Ny mpanao fankatovana sy ny loholona,
Ny mpifehy ny dimam-polo sy ny manan-kaja, Ny mpanolo-tsaina sy ny mahay zavatra Ary ny mahay ny fiboeriboeriky ny mpanao ody.
Ary hanendry ankizilahy madinika ho lehibeny Aho, Ary ny haitraitran-jaza no hanapaka azy.
Ary hifanipaka izy samy iray firenena, Dia samy ny namany avy sy ny akaiky azy avy; Ny tovolahy hirehareha amin'ny anti-panahy, Ary ny tsy manan-daza amin'ny manan-daza.
Raha misy olona angatahin'ny rahalahiny ao an-tranon-drainy ka ataony hoe: Hianao no manana lamba, koa aoka ho mpanapaka anay, Ary aoka ity faharavana ity ho raharahanao,[Heb. hazon']
Dia namaly izy amin'izany andro izany hoe: Tsy mety ho dokotera aho, Fa ao an-tranoko tsy misy hanina na lamba; Koa tsy azonareo hatao mpanapaka ny olona aho.
Fa tafintohina Jerosalema, Ary potraka Joda, satria ny lelany sy ny asany dia samy manohitra an'i Jehovah Mba hihaika ny mason'ny voninahiny.
Ny fisehon'ny tarehiny miampanga azy; Ary mampiharihary ny fahotany tahaka an'i Sodoma izy ka tsy manafina azy. Lozan'ny fanahiny! Fa mampidi-doza amin'ny tenany izy.
Lazaonareo ny amin'ny marina fa hahita soa izy, Fa ny vokatry ny asany no hohaniny.
Lozan'ny ratsy fanahy! hiharan'ny ratsy izy, Satria ny valin'ny nataon'ny tànany ihany no hanody azy.
Ny amin'ny oloko, dia zaza no mampahory azy, Ary ireo vehivavy no manapaka azy. Ry oloko ô, ny mpitarika anao no mampivily anao Sady mandrava ny lalana alehanao.
Jehovah mitsangana handahatra Ka miatrika hitsara ny firenena.
Jehovah miampanga ny loholona sy ny lehiben'ny olony amin'ny fitsarana hoe: Hianareo no efa nandevona ny tanim-boaloboka; Ary ao an-tranonareo ny fananan'ny malahelo izay efa nalaina an-keriny.
Ahoana no hevitrareo no dia hosihosenareo ny oloko, Ary torotoroinareo ny tavan'ny malahelo ? Hoy Jehovah, Tompon'ny maro.
Ary hoy koa Jehovah: Satria miavona ireo zanakavavin'i Ziona ka mandeha mianjonanjona sy manao maso meloka Sady kasikasy fandeha Ary mampikorintsandrintsana ny fehin-tongony,
Noho izany dia hataon'ny Tompo feno tako-pery ny tampon-dohan'ny zanakavavin'i Ziona, Ary Jehovah hampiseho ny fitanjahany.
Amin'izany andro izany dia hesorin'i Jehovah ny firavaka rehetra, na ny fehin-tongotra, Na ny fehi-loha, na ny sarim-bolan-tsinana, [Na: voavola]
Na ny kavina voavola, na ny rojo, na ny fisalobonana makarakara,[Na: haba]
Na ny satroka, na ny rojo parapaingo, na ny fehin-kibo misy haingony, Na ny fitoeran-dranomanitra, na ny ody fanaony ravaka,[Heb. diadema]
Na ny peratra, na ny kavin'orona,
Na ny akanjo fihaingoana, na ny kapôty, Na ny saly, na ny poketra,
Na ny fitaratra fizahana, na ny akanjo somizy anatiny, Na ny satroka fihaingoana, na ny lamba fisaronana;[He. hamama]
Ary ny manitra hosoloana ny maimbo; Ary ny fehin-kibo tsara hosoloana ny mahazaka; Ary ny volo voavoatra tsara hosoloana ny boriana; Ary ny akanjo miebanebana hosoloana ny lamba fisaonana; Ary ny hatsaran-tarehy hosoloana ny tomboka amin'ny vy mahamay.[Heb. lamba malailay]
Ny lehilahy ao aminao ho lavon-tsabatra, Ary ny mahery ao aminao ho faty an'ady;Ka dia hitomany sy hisaona ny vavahadiny; Ary ho lao ny tanàna ka hanjokaiky,
Ka dia hitomany sy hisaona ny vavahadiny; Ary ho lao ny tanàna ka hanjokaiky,